Pump Water Pump Photovoltaic Water Pumping System China Manufacturer
Nkọwa:Mmiri fotovoltaic na-ebu mmiri,Usoro Mgbapu,Mpaghara ndi ala ubi nke ubi foto
Mmiri fotovoltaic na-ebu mmiri,Usoro Mgbapu,Mpaghara ndi ala ubi nke ubi foto
Home > Ngwaahịa > Ụlọ igwe / DC > Pump anyanwụ > Pump Water Pump Photovoltaic Water Pumping System
Ubu oke: Can meet customer demand
Usoro HS: 8413190000
Igwe mmiri fotovoltaic na-arụ ọrụ site na fotovoltaic pumping inverter. Igwe ihe ntinye ihe ntinye ihe na vidiyo bu ihe ntanetiri nke fotovoltaic nke na-eji igwe eletrik eme site na foto voltaic iji kpoo mgbaputa. Photovoltaic na-ebu mmiri
Usoro ihe a nile gunyere mejuputa fotovoltaic, photovoltaic pumping inverter and pump.
Usoro mgbapụta. Mgbapụta mgbapụta nwere ọtụtụ uru, ike fotovoltaic adịghị ike iji akụkụ ndị na-akpụ akpụ, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Nchekwa, enweghị mkpọtụ, ọ dịghị ihe ize ndụ ọha mmadụ ọzọ. Ọ naghị emepụta ihe ọ bụla siri ike, mmiri mmiri na gas, kpamkpam. Ntuzi na mmezi dị mfe, ụgwọ ọrụ dị ntakịrị, adabara uru na atụghị anya. Ngwado mma, pv nwere ike iji ya na isi ike. Ala oru ugbo ala na-ekpuchi mmiri .
Ụkpụrụ dị elu nke nhazi, usoro na njikọ dịka nke components nwere ike izute mkpa nke ọkụ eletrik dị iche iche, nke dị ike.
Akwụsị nke ọma, ụgbọ ala na-ejikọtaghị nke ọma, arụmọrụ nke ọma site na 15% ruo 20%, ịzụta ume, ịbelata nchịkọta nchịkọta anyanwụ. Mkpụrụ ụyọkọ ụgbọala na-eji igwe ikuku windo arụ ọrụ zuru ezu iji meziwanye arụmọrụ moto. Nchedo ọgụgụ isi nke ụkọ mmiri, usoro ihe omume a ga-akwụsị na-akpaghị aka mgbe mmiri adịghị, ma malite na akpaghị aka mgbe minit 15 ma ọ bụ 30 nkeji.
Ngwaahịa : Ụlọ igwe / DC > Pump anyanwụ
Ejiri na-adịgide adịgide Brushless 24V DC
Mmiri fotovoltaic na-ebu mmiri
Mpaghara ndi ala ubi nke ubi foto
Mmiri ọkụ na-enwu mmiri
Mmiri Spotlights Mmiri
Mmiri na-enwu ọkụ na mmiri
Grid fotovoltaic jikọtara ọgbọ